Ulwazi malunga neKhabhinethi yeKhabhinethi
IKhabinethi kaMongameli iquka i- Vice-President we-United States kunye neentloko zamasebe angama-15 aseburhulumenteni -oonobhala bezoLimo, ezoRhwebo, uLwazi, iNkxaso, iMandla, ezeMpilo kunye neNkonzo zoLuntu, ukuKhuseleko lwaseKhaya, iiNdlu noPhuhliso lweMihlaba, ngaphakathi, I-State, iThutho, iNondyebo, kunye neMicimbi yezoLutsha, kunye ne-Attorney General.
Umongameli unokukhetha kwakhona abasebenzi abakhulu be-White House, iintloko zee-arhente ze-federal kunye ne-ambassador kwiZizwe eziManyeneyo njengamalungu eKhabhinethi, nangona oku kungummakishi wesimo somqondiso kwaye, ngaphandle kokuya kwiintlanganiso zeKhabhinethi, unika nawaphi na amandla .
Igama elithi "ikhabhinethi" livela kwigama lesiTaliyane elithi "i-cabinetto," elithetha "igumbi elincinane, igumbi labucala." Indawo enokuxoxa ngayo ibalulekileyo ibhizinisi ngaphandle kokuphazamiseka. Ukusetyenziswa kokuqala kwekota kuthethwa nguJacob Madison, ochaze iintlanganiso ngokuthi "kwikhabhinethi yomongameli."
Ngaba uMgaqo-siseko usungula iKhabinethi?
Hayi ngqo. Igunya lomgaqo-siseko weKhabinethi livela kwiCandelo lesi-2, iCandelo 2, elithetha ukuba umongameli "... angadinga umbono, ngokubhaliweyo, kwigosa eliyintloko kwiSebe ngalinye elilawulayo, nasiphi na isifundo esiphathelene nemisebenzi yabo ofisi. " Ngokufanayo, uMgaqo-siseko awucacisi ukuba yeyiphi na amasebe amagosa aphezulu angadalwa. Enye enye into ebonisa ukuba uMgaqo-siseko uguquguqukayo, uxwebhu oluphilileyo, olunokukwazi ukulawula ilizwe lethu ngaphandle kokunciphisa ukukhula kwalo. Ekubeni kungabonakali ngokukodwa kuMgaqo-siseko, iKhabhinethi yomongameli ngowomnye wemimiselo emininzi yokulungiswa komGaqo-siseko ngokwesiko, kunokuba iCongress.
Nguwuphi u Mongameli owamise iKhabinethi?
UMongameli uGeorge Washington wabiza umhlangano wokuqala weKhabhinethi ngoFebruwari 25, 1793. Ekhoyo kwintlanganiso yayinguMongameli Washington, uNobhala welizwe uThomas Jefferson, uNobhala weNondyebo u-Alexander Hamilton, uNobhala okanye iMfazwe uHenry Knox, kunye noMmeli-Jikelele u-Edmund Randolph.
Emva koko, loo ngqungquthela yokuqala yeKhabhinethi ibonisa ukuxhatshazwa xa uTomas Jefferson noAlexandria Hamilton bethintela iintloko ngombuzo wokugxininisa inkqubo yebhanki yase-United States ngokubanzi ngokudala ibhanki kazwelonke. Xa le mpikiswano yaba nefuthe ngokukhethekileyo, uJefferson, owayechasene nebhanki kazwelonke, wazama ukuhlalisa amanzi egumbini ngokubonisa ukuba i-tone acrimonious yale mpikiswano ayinalo impembelelo ekufezeni isakhiwo sikaRhulumente esilungileyo. "Intlungu yayingenxa kaHamilton kunye nam, kodwa uluntu aluzange lube neengxaki," kusho uJefferson.
Abakhetheli beKhabhinethi banyulwe njani?
Abameli beKhabinethi bamiselwa ngumongameli we-United States kodwa kufuneka bavunywe livoti loninzi lweSenethi . Imfundo kuphela yinto yokuba unobhala weSebe akakwazi ukuba yilungu leNgqungquthela okanye abambe enye i-ofisi ekhethiweyo.
Abanobhala beeKhabhinethi bahlawulwa buninzi?
Amagosa eenqanaba leKhabhinethi okwangoku (2018) ahlawule i $ 207,800 ngonyaka.
Abanobhala beeKhabhinethi bakhonza ixesha elide?
Amalungu eKhabhinethi (ngaphandle kwe-Vice-Mongameli) akhonza ngokuthanda umongameli, onokuwagxotha ngokuthanda ngaphandle kwesizathu. Wonke amagosa karhulumente aseburhulumenteni, kuquka namalungu eKhabhinethi, nawo ayaxhomekeke ekuphambeni kweNdlu yabameli kunye netyala kwi- Senate "yokunyaniseka, ukukhwabanisa, kunye nezinye izigwenxa eziphezulu kunye nabangalunganga ".
Ngokuqhelekileyo, amalungu eKhabhinethi akhonza nje ngokuba umongameli owamiseleyo uhlala eofisini. Abameli beSebe elilawulayo baphendula kuphela kumongameli kwaye kuphela umongameli angababulala. Kulindeleke ukuba bayeke emsebenzini xa umongameli omtsha ethatha isikhundla ngenxa yokuba abaninzi abaongameli abangenayo bakhetha ukuyifaka, nokuba kunjalo. Ngokuqinisekileyo kungekhona umsebenzi ozinzile, kodwa uNobhala weeRhulumente wase-United States u-1993-2001, ngokuqinisekileyo uya kukhangeleka kakuhle kwi-resume.
IQebhinethi likaMongameli ihlangana njani rhoqo?
Akukho sikhokelo esisemthethweni seentlanganiso zeKhabinethi, kodwa ngokubanzi abaphathi bazama ukudibana neekhabhinethi zabo ngeveki. Ngaphandle koomongameli kunye nesebe, iintlanganiso zeKhabhinethi zihlala zikhona kwi -vice-president , i-ambassador yase- United States kwiZizwe eziManyeneyo , kunye namanye amagosa aphezulu aphakanyiswe ngumongameli.
Ukugqithiswa kweZakhiwo kwiForam yaseRoma
I-Biology Prefixes kunye neSaffixes: i-erythr- or erythro-